DHULGARIIR:MAANSADA CUSUB EE ABWAAN HADRAAWI KU SOO BANDHIGAY MUNAASIBAD WEYN OO LAGU QABTAY HARGAYSA.
Arboco, May 02, 2007
Abwaan Maxamed Ibrahim Warsame (Xadrawi)
Hargeysa (TogdheerNews)- Xaflad ballaadhan oo lagaga hadlayey dhibaatooyinka haysta dadka la hayb-sooco, ayaa xalay lagu qabtay hoteelka Maansoor ee magaalada Hargeysa.
Abwaanka caanka ah ee Maxamed Ibraahim Warsame (Hadraawi), ayaa munaasibaddaa ku soo bandhigay maanso cusub oo la magac-baxday DHULGARIIR oo uu hal-abuurku kaga hadlayo xadgudubka iyo gabbood-falka loo geysto dad la hayb-sooco
Munaasibadda oo ay ka qaybgaleen masuuliyiin ka kala socday xukuumadda, Baarlamanka [Guurtida iyo Wakiillada], axsaabta qaranka, hay’adaha samafalka caalamiga ah, ururrada bulshada rayidka ah iyo boqollaal ka mid ah dadweynaha ku dhaqan caasimadda Hargeysa, ayaa waxa hadal kooban ka jeediyey Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Somaliland, Md. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro) oo arrinta hayb-sooca ku tilmaamay mid salka ku haysa aragti jaahilnimo oo aan cilmi iyo caqli toona ku dhisnayn, isla markaana ay kulamada noocan oo kale ahi wax weyn ka beddeleen.
Md. Cirro waxa uu dadweynaha reer Somaliland kula dardaarmay in wax-ka-qabashada arrinta takoorka beelaha laga tirada badan yahay aan lagu suulin Karin hadallo munaasibad laga yidhaahdo, balse ay u baahan tahay in lala yimaaddo ficil dhab oo meesha lagaga saarayo.
Gudd. xisbiga mucaaradka ee UCID, Md. Faysal Cali-waraabe & Gudd. Golaha Wakiillada Somaliland, Md. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro)
“Waxaan qabaa in tallaabooyinka wax lagaga qaban karo arrintan ay ugu horreyso in dadku diinta Islaamka bartaan, kuna dhaqmaan, iyada oo aynu ognahay in loo siman yahay diinta Islaamka, balse lagu kala duwan yahay camalka, arrinta labaadna waxa weeye tacliinta oo aan qabo in ay wax weyn ka beddeli doonto iyo dhaqaalaha oo kobca. Waxaan qabaa haddii aynu iskaashano shacbi, xukuumad iyo Baarlamaan ahaanba in aynu guulaysanayno,” ayuu yidhi Guddoomiye Cirro.
Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID, Mr. Faysal Cali-waraabe, ayaa tilmaamay in aragtida cunsiriyadda ee takoorka beelaha laga tirada badan yahay ku soo ururtay Somaliland, gaar ahaan Gobolka Hargeysa, marka loo eego Soomaalida kale oo dhan, taas oo uu ku sababeeyey in ay salka ku hayso qabyaalad, waxaannu soo jeediyey in sida keliya ee lagaga bixi karaa tahay iyada wacyigelinta laga soo bilaabo heer qoys, isla markaana shuruuc adag laga saaro hay’adaha ku dhaqma hayb-sooca sida dugsiyada iyo meelaha kale ee la midka ah.
Sidaa darteed, Faysal Cali-waraabe waxa uu ku taliyey in dadka laga tirada badan yahay laga qaybgeliyo maamulka dalka, isla markaana loo qoondeeyo xilal iyaga u gaar ah oo aanay cid kale la wadaagin.
Abwaan Maxamed Ibraahim Warsame (Hadraawi) oo munaasibaddaa hadal ka jeediyey, ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay weedhaha loo adeegsado dadka la hayb-sooco ee ay ka mid yihiin; bakhti-cun iyo gun, “Waxa caawa [xalay] ina kulmiyey waa qaddiyadda beelaha dhammaastu saaran tahay; anigu odhan maayo dadka la quudhsado’e, waa in aynu innagu hadalnaa, oo iyagu hadlaan oo lafaheenna badbaado u raadino. Waxaynu diidaynaa inaynu is-dhigano, dabadeedna sida aynu isaga fadhino dhiilku buuxsamo oo ay timaaddo ta caawa werwerku ka jiraa, waana wax aan dhici karayn in isha layska eegto oo sida ay weligeed ahaato ee wax baa imanaya ay caawa fududahay in la sii ogaado oo laga digtoonaado,” ayuu yidhi Abwaan Hadwraawi.
Isaga oo abwaanku arrintaa sii sharraxayey waxa uu intaa raaciyey; “Sannadkii 1960-kii iyo gobonimadii dagaalka lagu qaaday gumaysiga ee af iyo addinba lahaa, wuxuu ka dhexeeyey dadka dalkan ku nool oo ay ka mid yihiin kuwa aynu caawa [xalay] ka hadlayno arrintooda, dabadeedna waxa la yidhi waxaynu qaadanay gobonimo, taas oo dhinac qudha uuni qaatay oo innaga [ajiga] Ingiriis baa ina gumaysanayey, iyagana [beelaha la hayb-sooco] innaga ayaa gumaysanaynay, markaa habeenkaas uun bay haddii ragganimo jirto in la yidhaahdo laga bilaabo caawa waad nala xoroobaysaan, illeyn gobonimadaa la qaatay waxba umay soo kordhine.
Beri dhowayd waxa soo baxday sheeko la leeyahay waa la dhoofinayaa beelahaas oo waa loo gacan-haadiyey, oo dhoof baa u diyaar ah, dhoofkaasi wuxuu yimi goor dambe, kadib markii tallaabo la qaadi waayey waxa tallaabo qaaday nin kale oo arrintan [hayb-sooca] dan ka leh. Way dhoofayaan, laakiin haddii ay dhoofaan sidaa ma ku tegayaan ayaa su’aal ah? Jawaabtu waa maya, oo way dhoofayaan, waa la soo hubaynayaa, waxba waa la soo barayaa, qaddiyaddooda ayeyna helayaan jaanis ay kaga dhaadhiciyaan caalamka, garab iyo gaashaan bay soo helayaan, dhulka ayaana lagu soo celinayaa, dabadeed wixii dhacaya anigu halkaa dhaafin maayee nin rag ahi wuu garanayaa, nacasna loo sheegi maayo. Markaa waxaynu u baahanahay in ay nafaheenna badbaado u raadino oo wax macno ah oo ay inoo samaynaysaa ma jirto in dadka qaar gun noqdaan aan sabab lahayn, oo aan wax tixraac ahi jirin, meelna aan ku aroorayn, ma aha dad innaga duwan ee waa dad aynu wada dhalanay oo masiibadani [takoorka] ku habsatay oo xataa la sababayn Karin dembi ay galeen, waxana run ah in aanay bakhti cunin gunnimana la dhalan. Aniga waxa ii hal-hays ah ‘Anigu gob ku noqon maayo qof kale gunnimadii.”
Ugu dambayn, Abwaan Hadraawi waxa uu sheegay in aanay gabay iyo hadal toona waxba ka tarayn arrintan, balse loo baahan yahay xoojin ficil oo bulshada reer Somaliland kaga gilgilanayso tirtiridda dhaqanka, waxaannu u mahadnaqay ururrada soo agaasimay kulanka, gaar ahaan hal-abuurka da’da yar ee Axmed Aw Geeddi.
Boqor Axmed Iimaan oo ka mid ah madax-dhaqameedyada beelaha la hayb-sooco, ayaa qotodheer u faahfaahiyey dhibaatooyinka haysta dadka la takooro, waxaannu kulankan ku tilmaamay mid taariikhi ah oo muujinaya sida ay bulshada reer Somaliland u dareemeen dhibta ku habsatay beelahooda, isaga oo soo jeediyey in sida qudha ee lagaga bixi karaa tahay iyada oo bulshada wacyigelin ballaadhan laga siiyo.
Suldaan Naasir Suldaan Cabdi, ayaa ku boorriyey bulshada reer Somaliland in la barto diinta Islaamka, taas oo dadka simaysa, isla markaana reebaysa xadgudubyo iyaga dhexdooda ka dhaca.
Suldaan Daahir Xasan Khaliif, ayaa sheegay in dhibaatooyinka beelaha la hayb-sooco ay keeneen dhaqaale la’aan salka ku haysa shaqo-la’aan baahsan, waxaannu u soo jeediyey masuuliyiinta qaranka in laga qaybgeliyo hay’adaha dawladda iyo kuwa gaarka ah.
Maansada cusub ee DHALGARIIR oo soo baxay 01/05/2007, waxa uu Abwaan Hadraawi ku bilaabay sidan:
Xigasho: TogdhereNews, May 02, 2007